Reverse Email ရှာဖွေမူ ဆိုတာ ဘာလဲ! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Reverse Email ရှာဖွေမူ ဆိုတာ ဘာလဲ!
Reverse Email ရှာဖွေမူ ဆိုတာ ဘာလဲ!
Posted by မောင်လင်းငယ် on Sep 7, 2010 in Computers & Technology |0comments
အီးမေး အကြာင်း သိကောင်းစရာ
တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူက သင်ကို ဆက်သွယ်နေတာကြောင့် သူ သို့မဟုတ် သူမ ( ဆက်သွယ်ခဲ့သူ ) က အီးမေးလိပ်စာ သို့မဟုတ် IM ( Instant Messenger ) အသုံးပြုသူ နာမည်ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ သို့သော်လည်း မည်သူ့ ပိုင်ဆိုင်တယ် ဆိုတာကိုတော့ သင်သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းပြီ၊ RE ( Reverse Email ) ရှာဖွေရေးကို လုပ်ဆောင်ဖို့ အချိန်ရောက်လာပါပြီ။
RE ရှာဖွေရေးက စားသုံးသူများ၊ အင်တာနက်နဲ့ အီးမေး ဒေတာများ၊ အီးမေး လိပ်စာနဲ့ နာမည် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ လိပ်စာတို့ရဲ့ ဆက်သွယ်ချက်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရရှိနိုင်တဲ့ မှတ်တမ်းများရဲ့ အစုစီးရီးကို ရှာဖွေပါတယ်။ သင်ရှာဖွေတဲ့ အီးမေး လိပ်စာနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ နာမည်က တစ်ခုထက်ပိုနေမယ်ဆိုရင်တော့ RE လိပ်စာ ရှာဖွေရေးနဲ့ ထုတ်ဖော်ပါလိမ့်မယ်။
အင်တာနက် အသုံးပြုသူမည်သူမဆို ဖြစ်နိုင်ချေများတဲ့ RE ရှာဖွေရေးကို ပြုလုပ်ပေးတဲ့ နောက်တွင် သဲလွန်စတစ်ခု ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် သင် IP လိပ်စာက သင့်တည်နေရာကို ဖော်ပြနေချိန်တွင် အမျိုးမျိုးသော ၀က်ဆိုက်များကို သတင်းအချက်အလက် တင်ပေးလိုက်ခြင်းက သင် မည်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ညွှန်းပြနေပါလိမ့်မယ်။ ဒီသတင်း အချက်အလက်များကို မည်သူမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သို့ကြောင့် ယခုလောက်ဆို RE လိပ်စာ ရှာဖွေခြင်းက အလွန်လွယ်ကူပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့ အားမစိုက်ရဘူးဆိုတာ သိလောက်ပါပြီ။ သင် လည်ပတ်တဲ့ ၀က်ဆိုက်များနဲ့ သင်ကိုယ်တိုင် သင်အကြောင်းကို ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်များနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဂရုတစိုက် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။
ဘာကြောင့် Reverse Email ရှာဖွေမူကို လုပ်ဆောင်ရတာလဲ
သင် ဘာကြောင့် RE ရှာဖွေရေးကို လုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုက သင့် Inbox ထဲတွင် Junk and Spam အီးမေးများစွာကို လက်ခံရခဲ့ရင် ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဒီ အွန်လိုင်း အကြောင်းကြားစာများ ( Messages ) က သင့် ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာကို ထိခိုက်စေတဲ့ သို့မဟုတ် သင့် အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို ခြေရာခံတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်၊ Spyware နဲ့ Bug များကို သယ်ဆောင်လာပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ကြောင့် ဒီအီးမေးများရဲ့ ပေးပို့သူကို ရှာဖွေထုတ်ဖော်ခြင်းက သင့်နာမည်ကို သူတို့ ဖြန့်ဝေတဲ့ စာရင်းများမှ ဖျက်ပေးဖို့အတွက် တောင်းဆိုရာတွင် သင်ကို ကူညီပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် မူပိုင်ခွင့်နဲ့ ပက်သက်ပြီး မကျေနပ်ချက်ကို ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ သင်ဆီကို Junk အီးမေး ပေးပိုကနေတဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ အမှန်အကန် သက်သေကို ထောက်ပြနိုင်ပါတယ်။
RE လိပ်စာ ရှာဖွေရေးကို လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် တခြားသော အကြောင်းပြချက်တစ်ခုက အီးမေးလိပ်စာရဲ့ အမှန်တကယ် ရှိသလား မရှိဘူးလားဆိုတာကို စစ်ဆေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်အတော်ကြာအောင် အီးမေးလိပ်စာက ဆက်ပြီး မသုံးတော့တာလဲ ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်။ ပြီးတော့ ပိတ်ထားတာလဲ ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူက ဒီအီးမေးလိပ်စာကို မူလပိုင်ရှင် မသိအောင် ခိုးဝင်ပြီးတော့ သူတို့ ကိုယ်ပိုင် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် သုံးတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခြေနေ အရဆိုရင် အီးမေးလိပ်စာကို အသုံးပြုသူအသစ်ဆီကို ပေးပို့သွားနိုင်ပါတယ်။ RE ရှာဖွေရေးကို လုပ်ဆောင်ခြင်းက သင့်အီးမေးကို ရည်ရွယ်ထားတဲ့ လက်ခံသူဆီ ပေးပို့နေတယ်ဆိုတဲ့ သေချာမူကို ဖြန့်ဝေပါတယ်။ သင်က လျှိဝှက်ထားတဲ့ ဖိုင်များကို ပေးပို့နေတယ်ဆိုရင် ဒါက အလွန်ကို အရေးကြီးပါတယ်။
အရင်းအမြစ်အားလုံးက အင်တာနက်ပေါ်တွင် ရှိနေနှင့်တာကြောင့် အွန်လိုင်းထက် RE ရှာဖွေရေးကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်း မရှိပါဘူး။ Offline Database များတွင် RE ရှာဖွေရေးကို လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေက ကောက်ရိုးပုံထဲ အပ်တစ်ချောင်းရှာနေတာနဲ့ အများကြီးတူပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အင်တာနက် အကူအညီမပါဘဲ တခြားသော Database ရှာဖွေခြင်းကို လုပ်ဆောင်တာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် အွန်လိုင်း RE လိပ်စာ ရှာဖွေခြင်းရဲ့ စစ်ထားတဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေက ဆိုးဝါး နေဆဲပါပဲ။
ဒါဆိုရင် ယနေ့ သင် သက်သေပြချင်တဲ့ အီးမေးလိပ်စာက ဘာများပါလဲ???
(၀န်ခံချက်။ ။ စာရေးဆရာ Apmehta ရဲ့ “What Is A Reverse Email Search?” ဆောင်းပါးကို မြန်မာမူ ပြုတားပါတယ်။ )
တကယ်တမ်းကျတော့ နည်းပညာအကြောင်းကို ကျွန်တော် သိပ်မသိပါဘူး။ လေ့လာစရာတွေကလည်း English ဘာသာနဲ့ ရေးထားတာတွေဆိုတော့ ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မြန်မာလို ပြန်ဆိုရင်း ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းများ လေ့လာလို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။